က်န္းမာေရးဗဟုသုတ Archives - TheeSayChin
ထန်းရည်အချိုက ချိုပြီး အရသာလည်း ရှိတဲ့ သဘာဝထန်းပင်ကနေရတဲ့ ဝိုင်တစ်မျိုးပေါ့နော်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း နာမည်ကြီးတဲ့ သောက်စရာ တစ်မျိုးပါ။ အနောက် အာဖရိက၊ အာဖရိက အလယ်ပိုင်း၊ အာရှ၊ တောင်အမေရိက စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထန်းရည်အချိုကို သောက်သုံးကြပါတယ်။ ကင်ဆာ ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေး ထန်းရည်အချိုမှာ ဗီတာမင် B2 လို့ လူသိများကြတဲ့ Riboflavin ဓာတ်ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီဓာတ်က Antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်Free Radicals တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ သာမန် ထန်းရည်အချိုကို အသင့်အတင့်သောက်သုံးပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် B2 ဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြင်အားကို ကောင်းစေ ထန်းရည်မှာ Antioxidant၊ ဗီတာမင် စီဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် မျက်စိအမြင်အားကို ကောင်းစေပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ဗီတာမင် B1 […]
အေအးဆိုင်တြေမွာ မစ်ရွိတ်တြေ သောက္တဲ့အခါ သာကူစိအကြီးစားကြီးလို အိကိအိကိ နဲ့ အလုံးလေးတြေကို တြေ့ျမင္ဖူးကြမွာပါ။ အထူးသျဖင့် Bubble Tea လိုအေအးတြေမွာ တြေ့ရပါတယ်။ သူက စားလို့လည်းကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တြေ တော်အေအေးဆိုင်တွေမှာ မစ်ရှိတ်တွေ သောက်တဲ့အခါ သာကူစိအကြီးစားကြီးလို အိကျိအိကျိ နဲ့ အလုံးလေးတွေကို တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Bubble Tea လိုအအေးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူက စားလို့လည်းကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ တော်တော်များများထဲက မိန်းကလေးတွေက တော့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ Bubble အလုံးလေးတွေကိုတော့ ပီလောပီနံ နဲ့ ပြောင်းမှုန့် ရောကြိုပြီးတော့ သကြားနဲ့ သမအောင် လုံးထားတဲ့ အလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုံး ၁ လုံးတိုင်းမှာ ၁၄ ကယ်လိုရီ ပါဝင်ပါတယ်။ […]
အမျိုးသမီးတွေ အသက်ရလာရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ထားပါ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ် အရိုးပါး အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်လာရင် ကုသရ ခက်ခဲတာကြောင့် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပျိုမေတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်သင့်ပြီး မေမေတို့ကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလိုက်ပါနော် (၁) ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲမှာ ဆားပမာဏ များလွန်းတာက အရိုးဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပြီး အရိုးပါး အရိုးပွတာကို စောစောစီးစီး ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ (၂) ပရိုတင်းနဲ့ ကယ်လ်စီယံကို လုံလောက်အောင်စားပါ ပရိုတင်းဓာတ်က အရိုးသိပ်သည်းမှု ကောင်းစေတာကြောင့် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ အသားကို လုံလုံလောက်လောက် စားပေးရပါမယ်။ […]
နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာမစားတဲ့ အမျိုးသားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ 27% ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာ မစားတဲ့သူတွေက နာတာရှည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။မနက်စာ စားကျင့်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက နေ့စဉ် မနက်စာ စားတဲ့သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ ြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက မနက်စာ မစားဘဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ 54% ပိုများပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရ မနက်စာ မစားတာရဲ့ နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်မှန်းထားသလောက် ကိုယ်အလေးချိန်မကျဘဲ ပိုတက်လာစေပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အားအင်တွေအပေါ် မကောင်းတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။မနက်စာ […]
”ဆီးမထွက်တာတွေ ဓမ္မတာလွန်တာတွေ အတွက်၁၅ မိနစ်လောက်အတွင်းကောင်းတဲ့ဆေးနည်း”
“အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ” ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = အနာရောဂါ၊ ပရမံ = မြတ်သော၊ လာဘံ = လာဘ်မည်၏ …လို့ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်…ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဆုလာဘ်တစ်ခုပါပဲ… ကျန်းမာမှ စားချင်တာစားနိုင်၊ သွားချင်တာ သွားနိုင်၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင် မယ်လေ…. အဲဒီ့အတွက် “ယောက်ကျားမှာဆီး-မိန်းမမှာမီး”လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခု ရှိလာပြန်ပါတယ်… ယောက်ကျားလေးတွေဟာ ဆီးကောင်းမယ်.. မိန်းကလေးတွေကတော့ သွေး ကောင်းမယ်ဆို ဘာရောဂါမှအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး…ဒါကြောင့် ဆီးနဲ့ မီးကောင်းဖို့ အတွက် အထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်… အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆီးမထွက်ခြင်းနဲ့ ဓမ္မတာလွန်ခြင်းတို့ကို ၁၅မိနစ်တည်းနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ အဖိုးတန်ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်… အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သောက်ရမှာကြောက်သူတွေအတွက် သောက်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူသုံးနိုင်မယ့် မြန်မာဆေးနည်းလေးပါပဲ… လယ်ကန်စွန်းလို့ တစ်ချို့ကခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကန်စွန်းရိုးနီရဲ့ […]
လေးဖက်နာနှှင့် အရိုးကျီးပေါင်းသမားများ လက်စွဲဆေးတစ်လက်
လေးဖက်နာနှှင့် အရိုးကျီးပေါင်းတက်ရောဂါအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတလက် ကြက်ဥတလုံးကို ခွဲပါ။ အထဲက အဝါနှစ်ကိုထုတ်ပြစ်ပါ ဆေးထဲမထည့်ရပါ။ အကာချွဲချွဲပျစ်ပျစ် အဖြူရောင်ရည်နဲ့ နနွင်းမှုန့်မန်ကျည်း စေ့ခန့်ကို ရောပြီး မနက်အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း သောက်ပေးပါ ။ ။ တကယ်လို့ နနွင်းမှုန့်ကို နံလို့ အနံ့မခံနိုင်ရင် နနွင်းမှုန့် ကို အလုံးလေးတွေ လုံးပြီး နေလှန်း၊ ကြက်ဥရည်နဲ့ သောက်ရင်လဲ ရတယ်။ တပတ် နှစ်ပတ်နဲ့တော့ မပျောက်ဘူး။ ရောဂါအနုအရင့်အလိုက် စွဲသောက်ရမယ်။ သီရီ (နက္ခတ္တရောင်ခြည်-၂၀၀၉-၄) Unicode လေးဖက်နာနှှင့် အရိုးကျီးပေါင်းတက်ရောဂါအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်် ကြက်ဥတလုံးကို ခွဲပါ။ အထဲက အဝါနှစ်ကိုထုတ်ပြစ်ပါ ဆေးထဲမထည့်ရပါ။ အကာချွဲချွဲပျစ်ပျစ် အဖြူရောင်ရည်နဲ့ နနွင်းမှုန့်မန်ကျည်း စေ့ခန့်ကို ရောပြီး မနက်အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း သောက်ပေးပါ ။ […]
အဆိပ်ပြင်းမြွေ ကိုက်ခံရပြီဆိုလျှင် ယခုအပင် ၂ပင်ကိုသာရှာပါ
မြွေပွေးမြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါက ကြောက်စရာမလို သက်စောင်သမားတော်ဂျာနယ် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့်ကို အသက်သေသည်အထိ အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော ကိုက်တတ်သည့်မြွေများအနက်အများဆုံးမှာ မြွေပွေးမြေ ွဟောက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုမြွေပွေးမြွေဟောက်အကိုက်ခံရသည်မှာလည်း မြို့ရွာအတွင်းထက် တောထဲတောင်ထဲမှာ အကိုက်ခံရများလေ့ရှိသည်။တောတောင်အတွင်း မြွေပွေးမြွေဟောက် အကိုက်ခံရပါက ဆေးရုံဆေးခန်း ရှိရာသို့ပို့ ဆောင်ရန် ချက်ချင်းမလွယ်ကိူနိုင်သော်လည်း မြွေဆိပ်တို့မှာမူ လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့တတ်သဖြင့် လက်ဦးမှုယူ၍ လျင်မြန်စွာ ကုသရန်လိုပါသည်။ မြွေကိုက်ခံရသောလူနာကို ရှေးဦးသူနာပြုနည်းဖြင့် ချက်ကချင်းကာကွယ်ရန်လိုသည်။ခြေထောက်ကိုအကိုက်ခံရလျှင် ခြေသလုံးကို ကြိုးဖြင့်တင်းကာ ရစ်ပတ်ပေးခြင်း၊လက်ကို အကိုက်ခံရလျှင် လက်ဖျံကို ကြိုးဖြင့်တင်းကာ ချည်နှောင်ရစ်ပတ်ပေးခြင်းသည် မြွေဆိပ်များတစ်ကိုယ်လုံးကို လွယ်ကူစွာမပျံ့နှံ့ရန်ဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသများမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ လူနာရောက်ရှိရန် နာရီများစွာကြာနိုင်၏။ထိုကြောင့်တောထဲတောင်ထဲရပ်ကွက်ကထဲတွင် မြွေပွေးမြွေဟောက်အကိုက်ခံရသည့်လူနာကို ချက်ချင်းအသက် ကယ်တင်နိုင်သော သဘာဝပေါက်ပင်များဖြစ်သည့် ဥန္နဲပင်နှင့်နဘဲပင်ကို ရှာဖွေမှတ်သားထားသင့်ပါသည်။ ဥန္နဲပင်နှှင့်နဘဲပင်တို့ိသည် မိုးခေါင်ဗေရရှားအပူပိုင်ဒေသတွင် အနှံ့အပြားရှင်သန်ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ နဘဲပင်သည်အပင်ကြီး မျိုးဖြစ်၍ ပေ(၁၀၀)နီးပါးမြင့်မားသည်။ ဥန္နဲပင်မှာပင်ပုမျိုးချုံပုတ်ဆန်သော်လည်း ပေါက်ရောက်မြေကိုနှစ်သက်ပါက အမြင့်ပေ(၂၀)ကျော်အထိ […]
လက်ကပ်၊ ခြေကပ်ခြင်း အတွက် မုန်ညင်းဆီ
မုန်ညင်းဆီ နှင့် ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ သိပ်မကြာခင်က မုန်ညင်းဖြူရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံလေး မျှဝေပြီးပါပြီ ။ အခုက မုန်ညင်းဆီရဲ့ ဆေးဖက်အသုံးလေး တွေပါ ။ ဈေးနှုန်းလည်း ချိုသာပါတယ် ။ ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ် ။ အာနိသင္ မြန်မာဆေးကျမ်းများ အလိုအရ မုန်ညင်းသည် စပ် ခါးသော အရသာရှိ၍ ပူသောသတ္တိရှိဧ။် ။ ထက်မြက်ဧ။် ။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေဧ။် ။ သလိပ်တို့ကို ကင်းငြိမ်းစေဧ။်။ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ နူနာ၊ ယားယံခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေဧ။် ။ ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ အဆစ်ရောင်ခြင်း မုန်ညင်းစေ့ကို ကွမ်းစားဂမုန်းနှင့် သွေးပြီး အဆစ်ရောင်သော နေရာများအား လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်းဧ။် ။ နားနာ […]
နှလုံး သှေးကှောကဉွြးပှီး အသကရြှူုမဝ၍ ဆရာဝနနြှငြ့ပှ၊ဆေးမွားသောကသြောလြညြး သကသြာလှသညြ မဟုတပြါ။ နှှလုံး အထူးကုဆရာဝနကြှီးနှငြ့ပှကှညြ့ရာ ခှဲစိတဖြို့အကှံပေးပှီး ရကခြွိနြးပေးထားသညြ ဆိုပါသညြ။ထိုသူငယခြငွြး ကံကောငြးသညဟြု ဆိုရပလေိမြ့မညြ ။ဖေ့ဘုတပြေါမြှဆေးနညြးကောငြးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတခြငွသြောစိတဆြနျဒလညြးမရှိသောကှောငြ့ထိုဆေးနညြးလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညှှနြးအတိုငြးဆောငရြှကခြဲ့ပါသညြ။ကှကသြှနဖြှူ သူငယခြငွြးအားလညြးမခှဲစိတစြခငွေပြါအကှောငြးကားခှဲစိတမြညဆြိုပါကသိနြး(၁၀)အထကသြာကုနကြမွညဖြှဈပှီးဝနထြမြးတဈယောကြ၏လစာအခှအနေနှငြေ့ လုံးဝမလှယကြူသောကှောငြ့ဖှဈလသညြေ။သူငယခြငွြးဆုတောငြးပှညြ့ပါသညြ။ ခှဲစိတစြရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကှောကဉွြးရောဂါ သိသိသာသာသကသြာသှား၍ဖှဈ လသညြေ။ထိုဆေးနညြးမှာ….(၁)ခငွြးစိမြးသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၂)ကှကသြှနဖြှူသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၃)ရှောကရြညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ ၊(၄)ပနြးသီးရှာလကာရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကထြို(၄)ခှကအြားဆတူရော၍ (၃)ခှကလြွှငြ (၂)ခှကကြနွအြောငြ ကွိုရပါမညြ။ခငွြးစိမြး ထို(၃)ခှကြ(၂)ခှကစြာကနွပြါကပွားရညစြဈစဈလကဖြကရြညပြနြးကနလြုံး(၃)ခှကနြှငြ့နနှငြးမှုနြ့ကှမြးသီးလုံး(၁)လုံးစာမွှထညြ့မှှပှေီးတဈညအိပနြှပထြားရပါမညြ။ တဈနေ့လွှှငထြမငြးစားဇှနြး(၁)ဇှနြးသောကပြါ။ပနြးသီးရှာလကာရညကြိုအသငြ့ဝယယြူ၍ရနပေါပှီ။ထိုဆေးနညြးမှာနကျခတျတရောငခြှညတြှငဖြတရြှုရသောမောငအြေးကှူ(စီးပှားရေး)၏နှလုံးသှေးကှောကဉွြးဝဒနောရှငမြွားအတှကမြှ ထုတနြုတဖြေါပြှခှငြးဖှဈပါသညြ။ နှလုံံးသှေးကှောကဉွြးရောဂါသကသြာသညမြှာအမှနဖြှဈပါ၍ထပဆြငြ့ဝငှလေိုကပြါသညြ….။လိုသူယူသုံးစိတနြှလုံးရှှငပြှုံးနိုငပြါစေ…။ Credit…ရဲမွိုးသူ(ဗောဓိမှိုငြ) ယူနီကုဒဖြှငြ့ဖတရြနြ နှှလုံး သှေးကှောကဉွှးပှီး အသကရွှူုမဝ၍ ဆရာဝနနွှင့ပွှ၊ဆေးမှားသောကသွောလွညွး သကသွာလှသညွ မဟုတပွါ။နှှလုံး အထူးကုဆရာဝနကွှီးနှင့ပွှကှည့ရွာ ခှဲစိတဖွို့အကှံပေးပှီး ရကခွှိနွးပေးထားသညွ ဆိုပါသညွ။ထိုသူငယခွငွှးွ ကံကောငြးသညဟြု ဆိုရပလေိမြ့မညြ။ဖေ့ဘုတပြေါမြှဆေးနညြးကောငြးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတခြငွသြောစိတဆြနျဒလညြးမရှိသောကှောငြ့ထိုဆေးနညြးလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညှှနြးအတိုငြးဆောငရြှကခြဲ့ပါသညြ။ကှကသြှနဖြှူ သူငယခြငွြးအားလညြးမခှဲစိတစြခငွေပြါအကှောငြးကားခှဲစိတမြညဆြိုပါကသိနြး(၁၀)အထကသြာကုနကြမွညဖြှဈပှီးဝနထြမြးတဈယောကြ၏လစာအခှအနေနှငြေ့ လုံးဝမလှယကြူသောကှောငြ့ဖှဈလသညြေ။သူငယခြငွြးဆုတောငြးပှညြ့ပါသညြ။ ခှဲစိတြစြရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကှောကဉွြးရောဂါ သိသိသာသာသကသြာသှား၍ဖှဈ လသညြေ။ထိုဆေးနညြးမှာ….(၁)ခငွြးစိမြးသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၂)ကှကသြှနဖြှူသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊ (၃)ရှောကရြညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၄)ပနြးသီးရှာလကာရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကထြို(၄)ခှကအြားဆတူရော၍ (၃)ခှကလြွှငြ (၂)ခှကကြနွအြောငြ ကွိုရပါမညြ။ခငွြးစိမြး ထို(၃)ခှကြ(၂) […]
သွားကိုက်ဝေဒနာဆိုရင် ယောကျ်ားတွေတောင် ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပါဘူး။ သွားကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအပထား၊ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းရှာဖို့က အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မှီခိုအားထားကြပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသိပ်များလွန်းတာက တကယ်တော့ ကိုယ်ခံအား ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနည်းတွေကို ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ ပဋိဇီဝအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကြက်သွန်နီကို သွားကိုက်ဝေဒနာကုသရာမှာ အသုံးပြု အကြံပြုထားပါတယ်။နာကျင်ကိုက်ခဲမှု လျော့နည်းသက်သာအောင် ကြက်သွန်ဖြူ ၁မွှာ၊ ၂မွှာ ကိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ဆားရောစပ်ပြီး ကိုက်ခဲတဲ့သွားပေါ် လိမ်းပေးပါ။ ဝေဒနာပျောက်ကင်းစေဖို့ အာမခံပါတယ်။ ၂။ ပူစီနံတီး ပူစီနံတီးက ခံတွင်းအတွက်သာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘဲ သွားကိုက်ဝေဒနာပါ သက်သာစေပါတယ်။ ရေနွေးခွက်ထဲ ပူစီနံရွက်ခြောက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်းထည့်ပြီး မိနစ် ၂၀ […]